Fomba hiadiana amin'ny hatavezana kanelina | Tontolo alika
Lourdes Sarmiento | | Fahano alika sy alika kely
Ny fiterahana amin'ny alika dia olana iray izay tsy mitsaha-mitombo ary izany dia raha ny fanadihadiana natao tamin'ny 2015 nataon'ny PAW (PDSA Animal Welfare), 45% amin'ireo tompona alika no mino fa Ny hatavezina dia iray amin'ireo loza mitatao indrindra amin'ny biby fiompyindrindra ny alika ary indrindra amin'ny taona ho avy. Manaiky an'ity vinavina mampiahiahy ity ny mpitsabo biby.
Ny hatavezina amin'ny alika sy ny olombelona dia mitarika olana ara-pahasalamana maro toy ny diabeta, aretim-po sy taovam-pisefoana, tosidra ambony, aretin'ny aty ary homamiadana maro. Raha fintinina, mampihena ny faharetana sy ny fahasalamana marefo.
1 Ahoana no ahafahantsika miady amin'ny hatavezina?
2 Torohevitra hamerenana ny alikanao amin'ny endriny
2.1 Ohatrinona ny alika no tokony hohanina?
2.2 Karazan-tsakafo inona no tokony hohanin'ny alikako?
2.2.1 Sakafo manta
2.2.2 Sakafo maina
2.2.3 Sakafo manontolo
2.2.4 Sakafo fanampiny
2.2.5 Fananan-tena ara-batana
Ahoana no ahafahantsika miady amin'ny hatavezina?
Ny karazan'alika rehetra (sy ny fifangaroana) ny alika dia voakasik'izany, saingy ny firazanana sasany dia mazàna kokoa matavy noho ny hafa:
Mpanjaka Charles Spaniel, Cavalier
Dr. Ward an'ny Fikambanana ho fisorohana ny fiterahana Mpiara-miasa mpiompy biby (APOP) dia nilaza fa ny olana lehibe indrindra dia ny fahitan'ny tompony ny olana dia tara loatra izy ireo vao tonga.
Torohevitra hamerenana ny alikanao amin'ny endriny
Ny antony lehibe mahatonga ny hatavezina amin'ny alika dia a sakafo sakafo matavy be ary tsy fisian'ny fanatanjahan-tena.
Ohatrinona ny alika no tokony hohanina?
Tompon'ny alika maro no tsy mahalala ny fomba fatra ny fatra tokony hihinana isan'andro ny alikanao, satria miankina amin'ny habe sy ny taonan'ny alika ary ny karazan-tsakafo ny ampahany.
Ny dokoteranao dia tokony hanampy anao hamantatra ny sakafo mety ho an'ny alikanao ary na dia indraindray aza te-handratra ny biby fiompinay, dia tokony homena amin'ny antonony izany, na izany aza, ny mpitsabo anao dia ho afaka hilaza aminao tsara hoe ohatrinona no raisina.
Karazan-tsakafo inona no tokony hohanin'ny alikako?
Ny karazan-tsakafo dia manan-danja mitovy amin'ny habetsany ary ny zava-misy mahaliana kokoa dia ny alika 2,6 tapitrisa no omena sakafo sisa tavela.
Tsy misy valiny marina tokana momba ny karazan-tsakafo mety ny fahana, satria miankina amin'ny alika tsirairay izany ary amin'ny voalohany dia ilaina ny manandrana (miadana sy miadana) karazan-tsakafo maromaro alohan'ny hitadiavana izay mety.
Ireto misy sokajy lehibe amin'ny sakafo alika:
Ny iray amin'ireo sakafo vaovao kokoa ho an'ny alika dia ny sakafo hena manta izay azo vidiana amin'ny fivarotana biby na toeram-pitsaboana biby ary tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana.
Io no karazan-tsakafon'ny alika mahazatra satria io no mety mitahiry sy manome sakafo. Hita amin'ny endrika isan-karazany izy io, toy ny kibble, sakafo maina any ivelany, sakafo vaovao tsy ampy rano.
Ny ankamaroan'ny sakafo ho hitanao eny an-tsena dia feno, midika izany tsy mila manampy na inona na inona.
Tsy maintsy misy ny sakafo sasany nameno vitamina, mineraly, sns., na notantanana ankoatry ny sakafo feno.
Ny fandinihana ny alika amin'ny fanatanjahan-tena dia naneho fa ny isan-jaton'ny alika manana fanatanjahan-tena mihoatra ny 10 minitra isan'andro nihena 71% ka hatramin'ny 66% tao anatin'ny 5 taona lasa.
Fa na dia ho an'ireo alika 2,6 tapitrisa aza izay omena sakafo nandrahoina ao an-trano dia misy fomba hanampiana azy ireo hivezivezy handany herinaratra, toy ny jogging, mandeha an-tongotra lavitra, milalao ao an-trano, sns.
Inona no amahananao ny alikanao? Ahoana no anampianao azy handany ny heriny? Mizarà toro-hevitra sy fika amin'ny tazomy ny biby fiompinao Ary tadidio fa miankina aminao fa manana sakafo voalanjalanja izy, ka ataovy ho an'ny fahasalamany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Fomba hiadiana amin'ny hatavezana kaninina
Ahoana ny fampidirana alika amin'ny zaza